छोरी जन्मँदा सम्मान गर्ने समाजको खोजी ! « Pahilo News
छोरी जन्मँदा सम्मान गर्ने समाजको खोजी !
प्रकाशित मिति : 24 August, 2018 6:33 pm
काठमाडौँ, ८ भदौ । छोरी जन्माउदा राज्य र समाजले सम्मान गर्ने सामाजिक संस्कृति र प्रणालीको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । महिला हिंसा विरुद्ध प्रस्तुत भएको सङ्कल्प प्रस्तावमाथि बोल्दै सांसद आशाकुमारी विकले छोरी जन्माउँदा सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न माग गरेकी छन् । छोरा जन्मिँदा खुशी हुने र छोरी जन्मदा नाक खुम्च्याउने सामाजिक परिवेशले नै महिला हिंसा बढाएको उनको भनाइ थियो ।
नेपालको जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा महिलाकै भए पनि पितृसत्तात्मक सोचका कारण महिलामाथि ज्यादति बढेको, नाबालिका माथिको बलात्कार बढेको, कानूनको छिद्र खोजेर दोषी उम्काइएको सांसद कमला रोकाले उल्लेख गरीन ।
सङ्घीय संसद्को पहिलो अधिवेशनमा नै दर्ता गराएको प्रस्ताव ढिलै भए पनि छलफलमा आएको भन्दै सांसद शशी श्रेष्ठले सामाजिक जागरण नचलाइकन कुनै पनि हिंसाको अन्त्य नहुने भएकाले कडा कानून जरुरी रहेको आवश्यकता औंल्याईन ।
सांसद शान्ता चौधरीले सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति बनाएर देशव्यापी रुपमा अनुगमन गर्न र दोषीलाई कारवाही गर्ने वातावरण बनाउन माग गरिन । सांसद महेश्वर गहतराज, रङ्गमति शाही, डा सूर्य पाठकले कमजोर कानूनको फाइदा उठाएर महिला हिंसा बढेको, आर्थिक विभेद् र असमानता पनि त्यसको प्रमुख कारण रहेको बताए ।
महिला हिंसा अन्त्यको लागि विद्यालय तहबाटै पठनपाठनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सामाजिक सुधारको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सांसद जुलीकुमारी महतोले जोड दिए ।
सांसद नवीना लामाले सामाजिक न्याय र समानताका लागि हिंसामुक्त समाज निर्माण तर्फ ध्यान दिनुपर्छ भनिन ।
सांसद शान्तिमाया तामाङले महिला हिंसालाई जघन्य अपराधको रुपमा लिई दोषीलाई कडा भन्दा कडा कारवाहीको व्यवस्था हुनुपर्छ भनिन्। महिला हिंसाले सभ्य समाजलाई लज्जित बनाएको उल्लेख गर्दै सांसद गोमा देवकोटाले सामाजिक रुपमा समान नहुँदासम्म समस्या दोहोरिइरहने बताईन् ।